Huawei FreeBuds 4, nhọrọ kachasị mma na ekweisi TWS mepere emepe | Androidsis
Miguel Hernandez | 08/09/2021 12:00 | Emelitere ka 08/09/2021 12:46 | Noticias, Nyocha
Igwe isi ikuku TWS na -abanyewanye n'ahịa, nke na ihe siri ike bụ ịchọta onye n'okporo ụzọ na -ebuteghị ụdị ekweisi a. Maka nke a, enwere ọtụtụ ụdị na -aga n'ihu na -arụ ọrụ n'inye ndị ahịa ahịa kachasị mma dị ka Apple, Samsung na Huawei.
Anyị na-eleba anya na Huawei's FreeBuds 4, ọzọ nwere ANC yana imepe emepe. Chọpụta anyị nkọwa niile nke ekweisi ọhụrụ a sitere na ụlọ ọrụ Eshia ma ọ bụrụ n'ezie na ha nwere ike ịnye anyị teknụzụ ha kwere anyị ma ọ bụ na ha ga -abụ. Achọrọ m ma enweghị m ike.
1 Akụrụngwa na imewe: Ndozi nke usoro maka ịga nke ọma
3 Ọdịyo ọdịyo na ahụmịhe onye ọrụ
4 Nnwere onwe: Ikekwe tinye ya nke kacha njọ
Akụrụngwa na imewe: Ndozi nke usoro maka ịga nke ọma
Huawei FreeBuds 4 ndị a na -echetara anyị n'ụzọ doro anya ndị bu ha ụzọ, FreeBuds 4, ọ na -aga n'ekwughị na nhazi ha yiri Apple AirPods. Anyị na -ekwu maka eziokwu ahụ bụ na Huawei achọpụtaghị nzọ na ihe ọhụrụ na imewe nke FreeBuds 4, nke, ka ọ ghara ịbụ ihe ọjọọ, bụ isi ihe masịrị ya. nke ndị ọrụ ahụ chere maka ezigbo ihe ọzọ dị n'ime ekweisi a na-ahụta na "emepere emepe", ya bụ, na ha enweghị pads sistemụ na-ekele ya.
Isi ekweisi: X x 41 16 18 mm
Igbe igbe: X x 58 58 21 mm
Agba: Ọlaọcha na ọcha
Ibu isi ekweisi: 4,1 grams
Igbe ibu: 38 grams
Mgbe ekweisi na -egosipụta Ọdịdị akọwapụtara nke ọma na nke na -eme ka ha nọrọ n'ọnọdụ, igbe ahụ ka bụ Babybel okirikiri na -aga nke ọma na akpa anyị niile. Anyị nwere agba abụọ, n'agbanyeghị na n'ọnọdụ a, anyị enyochala ụdị ọla ọcha, nke, dịka ị na -ahụ, nwere isi ekwe ntị mara mma maka mkpịsị aka. Emechara, n'ozuzu ya, dị mma nke ukwuu na FreeBuds 4 a, ụlọ siri ike, ọkụ na ihe na -eguzogide, n'ihe banyere igbe anyị nwere mkpuchi matte. Ọ bụrụ n'ịhụta ha na -atọ ụtọ, enwere ezigbo ego na Amazon ugbu a.
N'ọkwa njikọta, FreeBuds 4 a na -adabere na Bluetooth 5.2 iji jigide njikọ kwụsiri ike ma dị mma, nke a ga -agbakwunye na ngwa Ai Life kpochapụwo, nke anyị na -echeta dị na Google Play Store na na App Store maka gam akporo na iOS n'otu n'otu. Ngwa dị mfe yana nhazi ya karia.
Anyị nwere ọkwọ ụgbọ ala nwere milimita 14,3 nke ahụ na -arụ ọrụ nke ọma, yana obere obere moto nwere ike ịkwaga diaphragm n'ebumnuche nke inye bass ka mma.
Ọkwọ ụgbọala: 14,3 mm
Dị ka Huawei si kwuo, isi okwu ọ bụla nwere sistemụ nchọpụta ntị nke ga -ahazi ogo ụda na mkpa nke onye ọrụ, ihe anyị na -enweghị ike ịchọpụta. N'otu aka ahụ, anyị nwere igwe okwu ekwenti na -enye ihe Huawei na -akpọ dị ka "HD oku", nwere ike ịkpa oke n'etiti gburugburu ebe obibi na olu, na -ahazi ụda a iji nye ahụmịhe kachasị mma ma na oku ma na ndekọ, a ga -ahụ nsonaazụ ya ozugbo na vidiyo anyị.
Anyị na -akọwa nkọwa nke bass, ihe anyị nwere ike ịhazigharị site na ngwa AI Life nke ga -enyere anyị aka ịkwalite midrange, bass ma ọ bụ hapụ ọrụ niile maka ọgụgụ isi. A na -emepụtaghachi etiti na elu n'ụzọ dị nnọọ iche, yabụ na ndị hụrụ egwu azụmahịa n'anya, yana ndị kpebiri iji ihe sitere na Queen nwalee ha. Site na AI Life anyị nwere ike, n'etiti ihe ndị ọzọ:
Tọọ ọnọdụ "oku Oku"
Gbanwuo kagbuo mkpọtụ
Gbanwee ogo ụda
Bass agbam ume
Mee Mgbasa Ozi
Gbanwee njikwa mmegharị ahụ
Kwado / gbanyụọ nchọpụta ojiji
Banyere kagbuo mkpọtụ na-arụ ọrụ, ọ bụ ihe niile anyị nwere ike ịtụ anya ya na ekweisi mepere emepe, kagbuo ngafe nwere nnukwu mmetụta, anyị amaghị n'ezie ma ọ ruru 25 dB nke Huawei kwere nkwa, mana anyị doro anya dị ka nke anyị si dị. ule na ọ dịkarịa ala Ee, anyị na -eche mkpọtụ mkpọtụ kachasị nke anyị nwere ike iji ekweisi ụdị a nweta. Ihe ndị a niile na -ejikwa njikwa mmegharị, na ndabara anyị nwere ike rụọ ọrụ ma ọ bụ gbanyụọ mkpọtụ mkpọtụ site na imetụ aka na isi ọ bụla.
Nnwere onwe: Ikekwe tinye ya nke kacha njọ
Nke bụ eziokwu bụ na ndị Huawei FreeBuds 4 na -emezu ihe ekwere na nkwa nke nnwere onwe nke ekweisi na igbe, ọ dị nwute na anyị na -ahụ nnwere onwe kwụ chịm nke ga -enwe ọtụtụ ihe jikọrọ ya na ike nke olu na usoro dị iche iche. ekweisi na -egbu egbu.. Anyị na -anụ ụtọ 30 mAh nke ike na ekweisi ọ bụla nke na -ekwe nkwa ịlaghachi azụ awa 2,5, ihe a na -agbasosi ike. PAnyị ga -agba gburugburu ihe dị ka elekere anọ nke nnwere onwe ma ọ bụrụ na anyị na -eme nchupu na ịkagbu mkpọtụ mkpọtụ na -arụ ọrụ, eziokwu bụkwa eziokwu.
Igwe okwu: 30 mAh
Ikpe: 410 mAh
2,5 awa na ANC
4 awa na -enweghị ANC
Anyị nwekwara chaja ikuku na Ụkpụrụ Qi, ee, ọ bụrụ na ịzụtara ihe nlereanya dabara na teknụzụ a, nke dị na nke a bụ nke nyochara. N'akụkụ nke ya, anyị nwere ọdụ ụgbọ mmiri USB-C nke ga-enyekwa anyị ohere ịgbakwunye awa abụọ nke nnwere onwe maka nkeji iri na ise nke chaji. Igbe nchaji 410 mAh a na -akwụ ụgwọ maka obere oge nke ekweisi, ebe ha na -akwụ ụgwọ ngwa ngwa.
Cheta na ị nwere ike zụta ha na ọnụahịa kacha mma na Amazon.
Anyị na -ahụ ihe dị ka ọ dị ugbu a ka ọ bụrụ ihe kachasị mma maka ekweisi "mepere emepe" n'ahịa, kọmpat, dị fechaa na ntụsara ahụ nke ga-amasị ọtụtụ ndị ọrụ, ọkachasị ndị nwere nsogbu n'iji ekweisi ntị. Nkagbu mkpọtụ adịghị ka nke ekweisi nwere sistemụ kagbuo na -agafe agafe, ọ bụ ya mere a ga -eji jiri ha tụnyere ndị na -asọrịta mpi n'ọkwá ha, ebe FreeBuds 4 a pụtara nke ọma maka ịnye mma na kagbuo kacha mma.
A na -ere ha na Amazon, ị nwere ike ịzụta ha site na euro 119 (Ọnụ ego euro 149 na mbụ), yana webụsaịtị gọọmentị nke Huawei. Cheta na ị nwere ike ịhụ nyocha miri emi na ọwa YouTube anyị na ịkpọghe igbe na ọwa ndị ọrụ ibe anyị na Actualdiad Gadget.
Ihe na: 8 Septemba nke 2021
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Noticias » Nyocha » Huawei FreeBuds 4, nhọrọ kachasị mma na ekweisi TWS mepere emepe [nyocha]
Ebe kacha njọ bụ na ọ bụrụ na gị na ha ga -eso ọsọ wee nwee ikuku dị ọkụ, nke a abanyela n'ime ya wee mee ka ha bụrụ ihe na -adịghị mma maka ịgba ọsọ. Ọbụlagodi na kagbuo mkpọtụ, a naghị ebelata ya. Mkpọtụ dị ka mgbe ị na -ewepụ ehi n'ụgbọ ala, nke na -efesa ikuku n'okporo ụzọ awara awara ma bụrụ ihe na -adịghị mma, n'ihi na otu ihe ahụ na -eme ekweisi ndị a.
Isi ihe ọzọ na -adịghị mma bụ na ọ bụrụ na ịnweghị ekwentị Huawei, mmegharị nke iwepu ekweisi na ịkwụsịtụ egwu anaghị arụ ọrụ, ihe ọzọ bụ isi.
Otu esi egwu maapụ ọhụrụ n'etiti anyị
Ngwa 4 kacha mma iji gbanwee okirikiri foto maka gam akporo